Fitaovana maimaimpoana ho an'ny fiarahamonina "malalaka" | Avy amin'ny Linux
Fitaovana maimaimpoana ho an'ny fiarahamonina "malalaka"
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, About us
ny. Juan Guillermo López Castellanos (mpandray anjara amin'ny humanOS)
Iray amin'ireo zavatra noteren'ny oniversite soratako tao amin'ny lisitry ny “tehezan-tendrombohitra”Elektronika. Nahafantatra zavatra momba izany aho semiconductors y microcontrollers amin'ny fotoanako maimaim-poana ao amin'ny UCI, saingy tsy mitsahatra ny mamantatra fa ny lohahevitra iray lehibe sy mahafinaritra toy izany, dia mila fandalinana ora maro kokoa noho ny fampianarana sy famokarana mamela ahy tamin'ny fotoanan'ny mpianatra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia te hiresaka aminao momba ny fe-potoana iray (na trangan-javatra iray?) Izay fantatro rehefa nanana fotoana aho handinihana bebe kokoa ilay lohahevitra, ary ny toetrany dia efa nahaliana izaitsizy: Free Hardware.
1 Fitaovana maimaimpoana?
2 Ilay hevitra mitovy ... misy fahasamihafana vitsivitsy
3 Ny tena zava-dehibe
Eny.Raha mandre izany ianao. Tena mahazatra ny mazàna ny fiaraha-monina misy antsika ny mandre momba ny “free softwareTsy mandeha amin'ny antsipiriany be loatra na paraphrasing Stallman
Ny lozisialy manaja ny fahalalahan'ny mpampiasa hampiasa, handinika, hanova ary hizara izany. Eny, ny foto-kevitry ny fitaovana maimaimpoana dia maka ny votoatin'ity farany, saingy ampiharina amin'ny elektronika.
Arduino. Andiana zana-kazo maimaim-poana ho an'ny tetik'asa elektronika
Toa adala io na tsy mitombina mihitsy aza amin'ny voalohany, indrindra ho an'ny olona mihetsika amin'ny toe-javatra misy antsika, ohatra, ny telefaona finday, mpamaky DVD na kapila mafy ary ny vahaolana mahazatra indrindra (fanariana ny fividianana vaovao: - /) dia ny manokatra azy, mahita ny olana ary manandrana manamboatra azy. Na, raha tsy mahavita an'izany, dia amboary ny olona iray manana traikefa bebe kokoa ary hanandrana zavatra mitovy amin'izany ihany:
Sokafy ny fitaovana
Manaova famakafakana ny famolavolana elektronika anao
Miezaha mitady ny loharanon'ny olana
Ary amboary ny ampahany tsy mety
Saingy ity zava-misy iainantsika ity dia mahatonga anao tsy hahafantatra fa, toy ny amin'ny rindrambaiko, vokatra maro amin'ny fitaovana no arovan'ny lalàna mametra izay mandrara ny olona mividy azy ireo tsy handinika ny fizaran-tany misy azy ireo, hitandrina azy ireo, na hanamboatra azy ireo… farafaharatsiny ara-dalàna.
Manazava izany amin'ny fomba tsotra ary manao fampitahana amin'ilay zavatra mitovy amin'ny lozisialy:
Mamaha olana iray ny fitaovana elektronika iray ...
tamin'ny alàlan'ny endrika noforonin'ny orinasa iray ...: - / ary matetika ny orinasa dia tsy liana amin'ny:
Azonao atao ny manamboatra ny fitaovana amin'ny tenanao rehefa tapaka.
Fantatrao ny nanamboarana azy.
Ary mainka! ... ny anaovanao azy tahaka azy.
Tsy fahalianana tsy mitombina ho azy ireo izany, ny mifanohitra amin'izay. Amin'ny famerana ny tompon'ny fahalalahana ireo, ny orinasa "miaro" ny fahalalana implicit izay misy ao amin'ny vokatra, ary miteraka fiankinan-doha manokana an'ny mpampiasa amin'ny marika amin'ny olan'ny fikojakojana sy ny fanohanana.
Ny tanjon'ity lahatsoratra ity dia tsy hitsikera na hiampanga io fomba fijerena zavatra io mihitsy. Tsy momba an'io fa mba ampahafantaro azy ireo fa ankoatr'izay (izay anisany maro an'isa) dia misy ihany koa ny Fitaovana Maimaimpoana, izay tsy iza fa (araka ny Wiki)
“… Ireo fitaovana finday manana specs y sary an-tsary azo ampahibemaso, na ambanin'ny karazana fandoavam-bola na maimaim-poana
Mixer audio DJ ... maimaim-poana!
Ny fiara voalohany naorina tanteraka taorian'ny filozofia Free Hardware
Ilay hevitra mitovy ... misy fahasamihafana vitsivitsy
Ny fanovana ny foto-kevitra amin'ny toe-javatra samihafa dia misy fiovana. Ary ny iray amin'ireo antony lehibe amin'ity tranga ity dia ny natioran'ny fitaovana. Raha mieritreritra an'io fotsiny isika dia afaka mahatsapa mora foana fa ny fahalalahana efatra an'ny rindrambaiko maimaimpoana dia tsy azo ampiharina amin'ny fitaovana. Ohatra:
Ny endrika ara-batana dia miavaka sy sarotra. Tsy resaka “manana ny endrika ary ankehitriny", Saingy amin'ireo fotodrafitrasa tokony hamerina ny endrika.
Ny fitaovana iray dia misy vidiny mifandraika amin'izany. Raha te hampiasa ny fitaovana misy olona hafa noforonina ianao dia tsy maintsy ataonao voalohany. Anisan'izany ny fividianana singa, ny fananganana ny endrika ary ny fizahan-toetra azy. Mandany izany rehetra izany.
Ireo singa dia tsy misy foana. Miankina amin'ny firenena indrindra. Amin'ny sasany dia misy fivarotana elektronika, mpaninjara ... fa ... ary amin'ireo izay tsy?
Betsaka ny patanty amin'ny hardware. Manana famolavolana fitaovana iray maimaim-poana ianao. Tena tsara! Saingy manana fahazoan-dàlana hampiasa izany microcontroller izany ianao? Ary ity singa hafa ity?
Modely famokarana sarotra io. Mila (idealy: - /) fotodrafitrasa famolavolana, fanahafana, famokarana ary fampiharana. Tsy ny olon-drehetra no afaka manamboatra fitaovana na dia manana ny fahalalana aza izy ireo. Ny fepetra takiana amin'ny tontolo iainana dia tsy tsotra.
Ny hardware ankehitriny ... dia tsy hardware fotsiny. Ny taonan'ny electronics analog dia efa lasa. Ankehitriny dia misy programa izay mandeha ao anaty ny fitaovana. Tsy avy amin'ny solosaina PC hidirana amin'ilay fitaovana, fa ao anatin'ny singa fampitaovana ihany. Izany dia manampy ambaratonga fanampiny amin'ny pitsiny ho an'izay te-hamerina endrika.
Tsy misy na inona na inona, tsy isalasalana fa fampifanarahana tena mavitrika izay manohy mivoatra. Na eo amin'ny pejin'ny Wikipedia izay resahiko aza any amin'ny faran'ny lahatsoratra, dia misy toko sy lohanteny be dia be hiatrehana toe-javatra tena manokana momba an'io raharaha io. Mihoatra lavitra ny tamin'ny nanadinako azy voalohany fony tany amin'ny oniversite.
Ny tena zava-dehibe
Ny tena nahagaga ahy raha nahare momba an'io lohahevitra io dia ny fiantraikan'ny filozofia amin'ny rindrambaiko maimaimpoana amin'ny famokarana ny TIK sy ny paradigma amin'ny tsena, eny fa na dia tsy ao anatin'ny tontolony aza, izay programa informatika.
Tena mahavariana izany, ary iza no mahalala raha amin'ny taona ho avy dia hipoitra amin'ny sehatra samihafa ny fampiharana vaovao ao aminy, tsy amin'ny siansa sy teknolojia solosaina ihany, fa amin'ny siansa sosialy, fanabeazana, zavakanto ... iza no mahalala?
Ao amin'ny lahatsoratra ho avy dia haneho hevitra momba ny tetikasa fikirakirana fitaovana maimaimpoana aho izay nanampy ahy manokana hianatra elektronika ary izay nanome be resaka.
Fampahalalana misimisy kokoa
Azonao atao ny mahazo fampahalalana bebe kokoa ao amin'ny pejy Hardware's Free Hardware:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fitaovana maimaimpoana ho an'ny fiarahamonina "malalaka"
14 hevitra, avelao ny anao
Filôzôfia tena tsara ampiharina amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainana andavan'andro, marina ny anao amin'ny teboka farany fa tsy fitaovana enti-miasa intsony ny fitaovana, ny vavahady dia nosoloina fitaovana azo namboarina izay manao lojika mitovy fa amin'ny fomba mahomby kokoa ary miaraka amin'ireo fitaovana vitsy.
Ho an'ny fanabeazana, hevitra tsara dia tsara ny manao mpanazatra hizaha toetra ary tsara lavitra kokoa raha toa ka endrika malalaka izy ireo satria misy mpianatra afaka manao ny azy.
Anti-Birao dia hoy izy:
Famakafakana tsara !!
Valiny ho an'ny AntiBureaucrat
Fitaovana maimaim-poana sy rindrambaiko maimaimpoana
Tsy maintsy maimaim-poana ny fahalalana ^^
Manaiky tanteraka ary mifanaraka tanteraka.
Lolo sy ny tariny dia hoy izy:
Misy mahalala proxy hidirana amin'ny HumanOs ve?
Valiny tamin'i Lolo
Ny olana dia tsy afaka mivoaka ny humanOS
Nieritreritra aho fa amin'ny maha-tranonkala Kiobàna ahy dia ho voasakana izy io ary azo idirana amin'ny alàlan'ny proxy izay toa hita fa mifandray avy any aho.
Moa ve sendra manana kinova miaraka amin'ny domain .onion ianao?
Fanadihadiana tena mahaliana.
Nandalina an'io lohahevitra io izahay nandritra ny taona maro izao. Ny fampiharana eo noho eo ny famaritana rindrambaiko maimaimpoana sy ny hevitra amin'ny fitaovana tsy azo atao. Araka ny nolazain'izy ireo tsara tao amin'ny lahatsoratra, noho ny antony maro, ankoatry ny hafa: ny vidiny mifandraika amin'izany, ny fahasarotana, ny fotodrafitrasa voakasik'izany, ny tsy fahafahan'ny famerenany eo noho eo toy ny amin'ny lozisialy, sns.
Mamela rohy vitsivitsy ho an'ireo izay liana amin'ny fanohizana ny fandefasana ny lohahevitra:
Na dia misy aza ny zava-tsarotra rehetra voalaza, dia nisy fandrosoana lehibe tamin'ny fampivoarana ny fitaovana maimaimpoana, ny tetikasa malaza indrindra dia ny Arduino sy Raspberry Pi.
Mahaliana ahy ihany koa ny milaza fa efa misy ny fahazoan-dàlan'ny fitaovana maimaimpoana. Raha ny marina, ny Apache Foundation sy ny CERN malaza dia namorona ny sasany izay manome famaritana samy hafa momba izay tokony ho takatry ny "hardware free". Fampahalalana bebe kokoa amin'ny:
Ary farany, marihina fa ny fampivoarana (na tsia) ny fitaovana maimaimpoana dia misy fiatraikany mivantana amin'ny famolavolana (na tsia) rindrambaiko maimaimpoana. Raha ny marina, mino ny fitaovana maimaimpoana i Stallman satria manamora ny fampandrosoana ireo mpamily mifanaraka aminy. Ohatra, raha fitaovana maimaimpoana ireo karatra horonantsary dia afaka manana mpamily horonantsary maimaim-poana tsara kokoa isika.
Miarahaba anao indray aho noho ny lahatsoratra tsara! Manararaotra ity fotoana ity ihany koa aho hanasana ny tsirairay hieritreritra fomba famoronana hamoronana "manafaka" ny fitaovantsika.
Azoko izao fa ny fahitalavitra farany novidian'ny fianakaviako dia nanana ny drafitra rehetra, mamaritra ny mampiavaka ny singa tsirairay. Toa nahafinaritra ahy izany, tsy hoe fantatro betsaka ny momba ny elektronika, fa ny hevitra tsotra hahafantarana fa raha misy zavatra simba ao dia afaka mividy ilay solony aho ary manova azy dia tiako izany! Na izany aza nahatsiaro ho voaro aho!
xD Tiako izany, andro iray mankaleo fijerena fahitalavitra dia afaka mametraka ahy handinika ireo taratasy ireo ary hianatra xd fitaovana kely
Miverina any am-pianarana dia hoy izy:
Misy finday misy toetra mampiavaka azy ankehitriny mifototra amin'ny fitaovana maimaimpoana?
Hividy iray ambony ambany aho.
Toa tsy azo iadian-kevitra amiko ny fomba fihevitr'ireo izay mandà tsy hanitatra fahalalana noho ny tombotsoany ara-toekarena fotsiny, izay mitarika amin'ny fampiroboroboana ny fitiavan-tena madio sy tsotra nefa manakana ny fampandrosoana ny fahalalan'ny fiarahamonina . Raha atao teny hafa, dia ny fomba fisainana patriarka.
Juan Guillermo Lopez dia hoy izy:
Miarahaba antsika rehetra. Tsy nahalala na inona na inona aho fa navoaka teto amin'ny DesdeLinux ny lahatsoratro. Misaotra antsika rehetra tamin'ny fanehoan-kevitra sy ny fahaliananao amin'ny fampivelarana ny lohahevitra.
Fiarahabana avy any Kiobà
Valiny tamin'i Juan Guillermo López
Ariel dia hoy izy:
Sehatra tena tsara izy io, indrindra ho an'ireo olona tsy manana fahalalana elektronika kely na tsy manam-pahalalana, izay mitondra ireo olona rehetra ireo hanakaiky kokoa ny tontolon'ny fitaovana elektronika manana hevitra lehibe.
Betsaka ny tetikasa tsotra sy mahaliana azo tanterahina.
Manoratra zavatra momba an'io sehatra io koa aho.
Ny zava-dehibe indrindra nanome hery lehibe azy dia ny fampiharana ny filozofia amin'ny rindrambaiko maimaimpoana amin'ny fitaovana.
Valio amin'i Ariel
Fampiresahana horonantsary eo anelanelan'ny Chrome sy Firefox amin'ny fampiasana WebRTC.
Ny mpampiasa Ubuntu dia efa manana kaonty 1,12% an'ny mpampiasa Steam